Wiilkii Soomaaliga ah ee Mölndal ku dilay gabadha oo la sheegay in uu qaangaar yahay | Somaliska
Wiilkii Soomaaliga ah ee gabadha ku dilay magaalada Mölndal ee duleedka Göteborg bilowga bishii Janaayo ayaa baaritaan dheeri ah oo ay samaysay laanta Socdaalka lagu sheegay in uu yahay qaangaar 18-sano jir ah. Wiilkaan ayaa markii uu dilka geystay da’iida lagu sheegay in uu yahay 15-sano jir taasoo muhiimad weyn u leh cinqaabka uu mudan karo.
Laanta Socdaalka (Migrationsverket) oo wareysi ka qaaday wiilkaan ayaa hadda ku sheegtay in da’diisa tahay 18-sano jir. Go’aankaan ayaa ku salaysan su’aalo la weydiiyay wiilka balse kuma salaysna baaritaan caafimaad oo lagu sameeyay.
Dambi oogaha qaabilsan kiiska wiilkaan oo lagu magacaabo Linda Wiking ayaa sheegtay in isbedalka lagu sameeyay da’da wiilkaan ay muhiimad u leedahay kiiska ka dhanka ah. Hadda ayaa waxaa loo maxkamadeyn doonaa sida qof weyn oo aan loola dhaqmi doonin in uu caruur yahay.
Sidoo kale Laanta Socdaalka ayaa diidmo siisay wiilkaan ku aadan magangalyadii uu dalbaday.
Wiilkaan ayaa middi ku dilay gabar u dhalatay wadanka Lebanon oo ka mid ahayd shaqaalaha guriga uu ku noolaa.
Dilka uu geystay wiilkaan ayaa argagax weyn ku dhaliyay Swedishka, iyadoo markii hore la sheegay in madaxa looga jiro balse dambi oogaha ayaa sheegtay in ay wali baaritaan ku hayaan wiilkaan oo aysan sheegi karin in uu xanuunsanyahay iyo in kale.
Sowlama dhihi karo da da waxaa laagu kordhiyey si loo naxkamadeeyo oo sidi qof wayn loola dhaqmo maadaama qofku haduu under age yahay ama aanu myndig ahayn xukunkusu kala duwanyahay
February 12, 2016 at 03:50
ilaahay ha u sahlo wiilka miskiinka ah ….alla adduunka dhib badanaaa
Cadaalad daro waa tan halkan na keentay. Qiil ha u raadinina . Danbigiisa halagu qaado. Hadii uu danbi lahayna waa lasii deynaa
Somali wayn says:
Hala xero hadii dil lagu xukumo ayaa ka soo fiicneed maxaa yeeley Somali waaye hadii meel somaliya kamid joogi lhaa shaati qabiil ayaa lugu difaaci lahaa Allah mahdiis cadaalada haqabto dil halagu xukumo
Garsoor iyo kala danbayn ayaa ka jirta Sverige. Hadii oo dilay gabadhaas waa lagu qaadaa waxi xeerkka dalka uga yaal. Hadii oosan galinne waa lasii daynayaa.
ruux qof dilay oo dil geystay ayay dadka qaar u naxayaan yaab, dhagar qabe akhirona ciqaab ifkana ciqaab waajibkiisa hala marsiiyo mastaafuris iyo xabsi daayin halagu rido dhagar qabaha.